Apple Pay dia ho tonga any Angletera fa misy famerana | Avy amin'ny mac aho
Apple Pay dia ho tonga any UK fa misy famerana
Iray amin'ireo zavatra noresahina tao amin'ny Keynote tamin'ny Alatsinainy ary ny lehiben'ny marketing an'ny orinasa miaraka amin'ny paoma manaikitra, Jennifer Bailey, Ny fahatongavan'i Apple Pay tany Angletera.
Bailey dia mpanatanteraka ao amin'ny Apple ary veteran ao amin'ny e-commerce izao tontolo izao ary izany no antony niasany tao Apple hatramin'ny 2003 tao amin'ny fizarana an-tserasera amin'ny Apple Store ary herintaona lasa izay no nandraisany ny serivisy Apple Pay.
Ny alatsinainy dia nisy fiasa vaovao nofaritana mifandraika amin'ny fahaizan'ny Apple Watch mitahiry carte de crédit hahafahany mandoa Apple Pay amin'ny fomba tsotra kokoa, fa inona no tena izy Mpampiasa an'arivony liana amin'izany dia nambara fa amin'ny volana Jolay dia ho tonga any United Kingdom ny Apple Pay.
Nambara fa efa nifampiraharaha tamin'ny banky lehibe valo izy ankoatry ny fananana orinasa an-tapitrisany. Ny asan'i Apple dia nahatratra ambaratonga iray izay Afaka mandoa amin'ny Apple Pay ianao na dia amin'ny fitateram-bahoaka aza.
Ary izahay dia mamerina milaza fa hitranga ny fahatongavan'i Apple Pay fa amin'ny fameperana sasany amin'ny fetran'ny fetran'ny karatra tsy misy fifandraisana sasany amin'izao fotoana izao izay tsy mamela ny fividianana mihoatra ny 20 euro raha tsy miditra amin'ny PIN. Raha ny momba ny Apple Pay dia hanana izany any Etazonia fetra 20 pounds (eo amin'ny 27,50 euro) ho an'ny fividianana rehetra azonao. Io fetra io dia mety hitombo hatramin'ny 30 pounds (41 euro) amin'ny volana septambra ary afaka mahita trano manokana aza ianao nefa tsy misy fetra toy izany.
Miaraka amin'ireto fetra ireto dia katsahina tsy hanana olana amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny fotoana voalohany fametrahana an'io karazana haitao io amin'ny mponina mbola tsy zatra an'ity serivisy ity. Rehefa mandeha ny fotoana dia hitombo ny fetra mandra-pahatongan'ny andro rehefa esorina ny fameperana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Pay » Apple Pay dia ho tonga any UK fa misy famerana
Apple Store amin'ny Fifth Avenue any New York hanidy ny fanavaozana
Mailaka marobe avy amin'ny Apple mampiroborobo ny Apple Watch